(src)="s3.1"> По дополнению Hello World для Kate на данный момент нет документации . Если вы желаете исправить сложившуюся ситуацию , сообщите об этом в списке рассылки на http : / /master.kde.org / mailman / listinfo / kde-doc-english .
(src)="s5.1"> Перевод на русский : Ольга Карпова karpovolga@hotmail.com
(trg)="s13.1"> Ingxoxo yemiba yelayisenisi
(trg)="s15.1"> Iyaxoxa " imiba yokujonga nokuva "
(trg)="s17.1"> Yenza ii icon nomnye umsebenzi wokuzoba
(trg)="s19.1"> Yabantu abanomdla ekubhaleni uxwebhu le KDE .
(trg)="s21.1"> Imiba jikelele nokwenziwa koxwebhu
(trg)="s23.1"> Yolwazi lobulali , olunokuquka uluhlu lomsebenzisi we email ne websites , khangela iphepha lamaqela oguqulelo kwengentla i URL .
(trg)="s24.1"> Ukunikela :
(trg)="s24.2"> Nceda bhala idilesi yakho yokwenene ye email endaweni yengenanto " idilesi-yakho ye-email " amagama .
(trg)="s24.3"> Shiya umzimba womyalezo ungenanto .
(trg)="s24.4"> Sukuquka utyikityo okanye amnye ongadidekisa umncedisi weposi oqhubekekisa isicelo sakho .
(trg)="s25.1"> Ukunganikeli :
(trg)="s25.2"> Nceda buyisela " idilesi-yakho ye-email " ngedilesi ye email oyisebenzise kunikelo .
(trg)="s25.3"> Shiya umzimba womyalezo ungenanto .
(trg)="s25.4"> Sukuquka utyikityo okanye omnye umsebenzi ozakudidekisa umncedisi weposi oqhubekekisa esakho isicelo .
(trg)="s26.1"> Iidilesi ezidweliswe ngasentla , zeze iyanikela kwaye ayinikeli kuphela .
(trg)="s26.2"> Xa unikele kuluhlu lokuposa , uzakufumana umyalezo okuxelela indlela yokuthumela imiyalezo kuluhlu lokuposa , kwaye nokulungisa iinketho zakho zoluhlu lokuposa .
(trg)="s27.1"> Nceda sukuthumela imiyalezo emayiposwe kuluhlu lokuposa kwidilesi ezingasentla .
(trg)="s28.1"> Nceda sukusebenzisa HTML ukuthumela isicelo sakho kuba yenza nzima kumncedisi wethu weposi ukuqhubekisa isicelo sakho .
(trg)="s28.2"> Ukuba idilesi yonikelo iyafana nedilesi oyiposayo ungashiya idilesi kwilayini yomxholo .
(trg)="s29.1"> Iqhagamshela ababhekisi phambili be KDE
(trg)="s30.1"> Iidilesi zokuqhagamshelana zababhekisi phambili zingafunyanwa kuxwebhu lwezicelo ezizodwa .
(trg)="s31.1"> Iziqhagamshelwano ezisemthethweni
(trg)="s32.1"> Nceda ndwendwela eyethu i Abameli Abasemthethweni iphepha ukuba ufuna ukuqhagamshelana ne KDE kwi ndlela esemthethweni .
(trg)="s33.1"> Ulwazi oluninzi
(trg)="s34.1"> Nceda fumana ulwazi oluninzi malunga ne KDE e http : / /www.kde.org .
(trg)="s1.1"> Malunga nale FAQ
(trg)="s2.1"> Ndingenza ntoni ukunceda ngale FAQ ?
(trg)="s3.2"> Kwakhona , naziphi na iziphakamiso onokubanazo ziyavuyelwa .
(trg)="s3.3"> Kungcono noko , nayiphi na into ocinga ukuba ayicacanga , kwaye ukuba kuyenzeka , sithumele ocinga ukuba kucacile .
(trg)="s4.1"> Okwesibini , sithumele izisombululo zakho zemibuzo ebuzwa-rhoqo ekwakule FAQ .
(trg)="s4.2"> Sizakuzibeka ngokukhawuleza .